SEO: Cusboonaysiinta BERT ee Google waxay caawisaa Bogagga Alaabta Ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SEO: Cusboonaysiinta BERT ee Google waxay caawisaa Bogagga Alaabta Ecommerce
SEO: Cusboonaysiinta BERT ee Google waxay caawisaa Bogagga Alaabta Ecommerce
Algorithm-ka Google-ka ee BERT, oo la sii daayay usbuucii hore, waa dadaalkii ugu dambeeyay ee shirkaddu ay ku fahamto ulajeedka weydiinta raadinta. Goobaha ecommerce, tafaasiisha gaarka ah ee bogga alaabada ayaa hadda wadi kara taraafikada raadinta dabiiciga ah oo badan oo leh ujeedo iibsi sare leh.
BERT - Labada jiho ee matalayaasha Transformers - waa isha furan ee algorithm ka Google si loogu habeeyo kelmad kasta su'aal raadin marka loo eego ereyada kale ee ku jira su'aashaas, oo ka soo horjeeda mid-mid-mid ah sida ay u muuqdaan.
Waxyaalaha kale, waxay qabataa shaqo fiican oo lagu qiimeeyo horudhacyada - sida "to" iyo "la".
BERT ma beddesho RankBrain, dadaalka Google ee 2015 si loo fahmo ujeeddada baarayaasha. Taa baddalkeeda, labada RankBrain iyo BERT, oo isku mar la wada codsado, waxay gacan ka geysan karaan go'aaminta ujeeddada oo ay keenaan natiijooyinka raadinta ugu habboon.
Google ayaa soo bandhigtay dhowr tusaale, oo uu ku jiro kan hoose ee weydiinta "2019 Brazil Traveler to USA need a visa." Markii hore, Google wuxuu tusi lahaa liisaska dabiiciga ah ee fiisaha Mareykanka iyo Brazil labadaba sababtoo ah ma aysan fahmin muhiimada hordhaca ah "si." Laakiin hadda, natiijadu waxay tusinaysaa macluumaadka kaliya ee dadka safarka ku ah Maraykanka
Algorithm ka hor BERT, su'aasha "2019 Brazil safarka ku ah USA waxay u baahan tahay fiisaha" waxay muujin lahayd liisaska dabiiciga ah ee fiisaha Mareykanka iyo Brazil labadaba. Laakiin hadda, natiijadu waxay tusinaysaa macluumaadka kaliya ee dadka safarka ku ah Maraykanka Xigasho: Google. Riix image si aad u ballaadhiso.
Iyadoo BERT la geeyay Maraykanka Oktoobar 25, natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google iyo qaybo muuqda ayaa ku dhow inay siiyaan baarayaasha natiijooyin la taaban karo oo loogu talagalay weydiimo badan oo adag, sida raadinta ganacsiga dabada-dheer.
Bogagga wax soo saarka
Bogagga badeecada iyo shabagyada badeecada ee la sifeeyay waxay u janjeeraan inay darajo fiican ugu jiraan weydiimaha dabada-dheer. Markaa boggagaas ayaa leh awoodda ugu badan ee laga faa'iidaysan karo BERT. Muhiimada horudhacyadu waxay si gaar ah u khuseeyaan sifooyinka alaabta, sida midabka, cabbirka, iyo walxaha.
Bal qiyaas dhammaan tafaasiisha alaabta ee ay dukaamaystayaashu raadiyaan. Faahfaahintaasi waxay inta badan ka mid yihiin magacyada alaabta iyo sifaadka ay ku xidhan yihiin horudhacyada, kuwaas oo aan farta ku fiiqay tusaalayaasha hoose.
daaqadaha beerashada la alwaax adag;
"daah 10 cagood ah oo tusbaxsan la qaanso-roobaadka kuul crystal dhabta ah;
giraanta hawlgelinta diamond solitaire la caleemaha band dahab rose."
Sida boggaga alaabtaadu u muujiyaan tafaasiishan ayaa aad uga muhimsan BERT. Waa fursad aad ku wanaajiso sharraxaadaha alaabtaada ugu iibinta fiican oo ay ku jiraan waxyaabo aan goob kale isticmaalin.
Iyada oo ku saleysan cilmi baarista ereyga muhiimka ah, waxaad horeyba u ogeyd qaar ka mid ah sifooyinka badeecada ee baarayaashaadu ay xiisaynayaan. Dukaamada ayaa Google u sheegaya waxay rabaan inay ka soo iibsadaan weydiimaha raadinta. Google waxay xogtaas ku wadaagtaa Qorsheeyaha Keyword-ka.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku darto sifooyinka ku qoran faahfaahinta bogga alaabtaada. Tusaale ahaan, si aad ugu guulaysato raadinta "dariishada beerashada oo leh alwaax adag" dukaanku wuxuu ku caddayn karaa sharaxaadda in xidhitaannada beeritaanka ay ka samaysan yihiin alwaax.
Intaa waxaa dheer, bakhaarku waa inuu taxayaa dhammayn kasta oo la heli karo oo loogu talagalay xirayaashaas. Sida ay tani u sameyso waa muhiim. Sawirada midab-kala-sooca ma caawiyaan makiinadaha raadinta. Liistada kaliya magacyada midabka ma caawinto dukaamaysiga. Waxa loo baahan yahay labadaba: muuqaal loogu talagalay dukaamaysiga iyo calaamadda qoraalka ee makiinadaha raadinta.
Istaraatiijiyad kale oo saaxiibtinimo leh oo BERT ah oo lagu beegsanayo weydiimaha dabada dheer waxay ku lug leedahay ka faa'iidaysiga goob-raadinta la sifeeyay - kuwan kumanaanka alaabada la sifeeyay ee ka soo jeeda sifooyinka alaabta, sida "dahab kacay" iyo "solitaire" ee giraan, sida "solitaire giraanta ee Rose dahab.”
Si kastaba ha ahaatee, si taxadar leh u maamul xeeladda. Tilmaanta kaliya bogag leh filtarrada qiimaha sare leh. Tusaale ahaan, marka loo eego xogta Qorsheeyaha Keyword, filtarrada giraanta "dahab jaalaha ah" iyo "dahab kacay" waxay leeyihiin qiimo raadinta organic ka badan marka loo eego shaandhada qiimaha "ka yar $1,000."
Weydiimaha raadinta ee ka kooban badeecada iyo sifaadka labadaba, Google wuxuu baneeyaa inta u dhaxaysa muujinta boggaga tafatirka alaabta iyo shabagyada alaabta la sifeeyay. Marka su'aaluhu noqdaan kuwo aad u adag - sida kuwa leh sifooyinka - natiijooyinka raadinta waxay ka koobnaan karaan labada nooc ee bogag. Laakiin boggaga tafatirka alaabtu waxay u janjeeraan inay darajo sare qaataan.
Algorithm raadinta Google weli si buuxda uma fahmin nuxurka luqadda aadanaha. Laakiin algorithm-ka BERT wuu caawiyaa. Iyada oo ay awood u leedahay in ay qiimeeyaan su'aasha oo dhan, oo ay ku jiraan horudhacyada, BERT waxay siisaa goobaha ecommerce fursad ay ku kaxeyso taraafikada raadinta dabiiciga ah ee dheeraadka ah ee faahfaahinta alaabta iyo boggaga alaabta.
20 Gutenberg ugu Fiican Mawduucyada WordPress
Xakamaynta Nooca WordPress (Waa maxay iyo Xalka ugu Wanaagsan)